Titanium Boride Powder, TiB2 - Goodao Technology Co, Ltd.
inoshandiswa kune inoitisa zvinhu zveinopisa-kudzvanya zvedongo zvigadzirwa, tembiricha yakakosha zvikamu, zvinoumbwa zvedongo zvinhu, zvakagadzirwa nePTC kudziyisa zvedongo zvinhu uye zvinoshanduka PTC zvigadzirwa, yekuzadza yekupfeka ndiyo hombe mbishi zvinhu zvekumuka kwechikepe uye aruminiyamu electrolytic cell cathode kupfeka zvinhu.
Molecular fomula TIB2
Nzvimbo yakanyunguduka 2980 "C
Zvishandiso inoshandiswa kune inoitisa zvinhu zveinopisa-kudzvanya zvedongo zvigadzirwa, / gtemperature yakakosha zvikamu, zvinoumbwa nezvedongo zvigadzirwa, zvakagadzirwa nePTC kudziyidzaamamic zvinhu uye inochinjika PTC zvigadzirwa, yekuzadza yekupfeka ndiyo hombe yakasvibirira yekudzoka kwechikepe uye aruminiyamu electrolytic cell cathodecoating zvinhu
utsotso: 2900-3225 ° C
density; 4.52 g / ml pa25 ℃ (chiedza)
yakasimba muhydrogen peroxide uye sulfuric acid
Chigadzirwa ichi grey hexagonal crystal ine hukama hwehukama hwe4.50 uye nzvimbo inonyungudika 2900 ℃. Iine kuomarara kwakasimba uye simba, kupisa kwakanaka kwekurwisa, kushomeka kwemagetsi uye hakusi nyore kukanganiswa nesimbi yakanyungudutswa.
Iyo poda inoshandiswa muroketi kabhu, yemagetsi kuonana uye yakanyanya tembiricha electrode zvinhu, zvakare inogona kushandiswa sehasha .; conductive ceramics, chishandiso ceramics, conductive kupfeka-isingagadzirike kupfeka V kushandiswa; conductive rinoumba zvinhu. conductive boron nitride (steamboat), Yakagadzirwa ne titanium diboride (TiB2) uye boron nitride (BN), ndicho chikamu chikuru chemuchina wekuvhenekesa michina. Ceramic yekucheka maturusi uye zvikamu. Titanium diboride ceramics inogadzirwa netambo yekudhirowa inofa, extrusion inofa, sandblasting nozzles, yekuisa chisimbiso zvinhu, ekucheka maturusi, nezvimwe. Titanium diboride inogona kushandiswa sechinhu chakakosha chezvinhu zvakasiyana-siyana zvinoumbwa nezvinhu. Titanium diboride inogona kushandiswa seyekucheka chishandiso k chinoumbwa nezvinhu ne tic, tin, SiC nezvimwe zvinhu. Inogona zvakare kushandiswa sechinhu kugadzira nhumbi dzekuchengetedza nhumbi. Icho chakanakisa chinyorwa cheakasiyana-siyana epamusoro-tembiricha zvikamu uye zvinoshanda zvishandiso. Cathode zvigadzirwa zvealuminium electrolysis.
Inogona kushandiswa Seye cathode zvinhu zvealuminium yekudzora sero, TiB2 ine yakanaka kunyorova ine yakanyungudutswa aluminium, iyo inoderedza kushandiswa kwesimba kwe electrolytic aluminium uye inowedzera hupenyu hwe electrolytic cell.
Inogona zvakare kuitwa PTC kudziyisa zvinhu uye inoshanduka PTC zvinhu, inova inosimbisa mumiririri weA1, Fe, Cu uye zvimwe zvinhu zvesimbi. Kushanda: inoshandiswa sedombo rekombeti, kusangana kwemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi; boron carbide nzira, inozivikanwawo se carbothermal nzira yekudzora, inogona kugadzirirwa nekushandisa TiCl4 uye BCl3 sezvinhu zvakagadzirwa, pasi peH2 mamiriro, tembiricha yekuisa iri 800 ~ 1000 ℃, TiCl4 + 2bcl3 + 5h2 = TiB2 + 10hcl, kunyorera kuchigayo uye zvigadzirwa zvemagetsi.
Pashure: Zirconium Boride Upfu, ZrB2
Zvadaro: Chromium Boride Upfu, CrB2
Yakachena Titanium Boride Powder Fekitori
Yakachena Titanium Boride Powder Mugadziri
Titanium boride yeupfu Mafekitori
Titanium boride yeupfu Fekitori
Titanium boride poda Mugadziri
Titanium boride poda Vagadziri
Titanium boride yeupfu Mutengo